welshman ncube on News24
ARTICLES RELATING TO WELSHMAN NCUBE
Zimbabwe's opposition leader Nelson Chamisa has reportedly made sweeping changes to the leadership of his Movement for Democratic Change party.
Zimbabwean opposition, the Movement for Democratic Change part led by Welshman Ncube, has reportedly accused the army of "terrorising villagers" in Matabeleland ahead of the forthcoming elections.
The Zimbabwean government has slammed opposition party leaders for reportedly advocating for the continuation of sanctions against the country, says a report.
Zimbabwe's ex vice president now the leader of the opposition NPP, Joice Mujuru, has demanded that the name MDC be removed from the grand coalition set to challenge President Robert Mugabe in the 2018 polls.
Zimbabwe's main opposition leader has Morgan Tsvangirai re-united with his former allies to forge a coalition aimed at ending President Robert Mugabe's near four-decade hold on power in elections next year.
Despite their differences, former Zimbabwean vice president Joice Mujuru and MDC leader Morgan Tsvangirai are in talks to lead a united opposition alliance to try unseat President Robert Mugabe in the upcoming 2018 elections.
Former freedom fighters have reportedly rebuked ex-president Robert Mugabe for criticising Zimbabwe's new administration, and the MDC has reportedly called for the arrest of former first lady Grace Mugabe over fake her PhD.
Zimbabwean Vice President Constantino Chiwenga reportedly left lawmakers from the MDC outraged when he told the party's vice president the country would have been better off if he had not gone to America and other places "campaigning for sanctions".
Mugabe VP Mphoko 'demands exit package' – report
Zimbabwe's former deputy president Phelekezela Mphoko has reportedly demanded an exit package after being fired from both government and the ruling Zanu-PF in November.
Zimbabwe's former vice president Emmerson Mnangagwa is free to join the opposition after he was sacked from his position by President Robert Mugabe, opposition parties have reportedly said.
On Saturday, Morgan Tsvangirai's MDC party signed a pact with six other political parties to contest next year's elections as a united front. But will this be enough to defeat President Robert Mugabe and his Zanu-PF party?
The Zimbabwe Communist Party says it is working towards the "equal sharing of the country's wealth", after it "successfully" held a meeting of its steering committee members in Midrand over the weekend.
Zimbabwe clergy Evan Mawarire is coalescing social movements against President Robert Mugabe ahead of the 2018 polls. Some think Mawarire can play "a similar role to the one Archbishop Tutu and the UDF played in the final years of apartheid".
Zimbabwe’s opposition MDC led by Welshman Ncube has reportedly said the fall of dictatorship in Myanmar is an indication Zimbabwe would one day be freed from President Robert Mugabe’s rule.
Daily Lotto winner scores R320K 26 minutes ago Click here for the full list of lottery results